I-amazon iphinda ibuyise ixesha lokuzimela kubantwana base-amazon, yongeza amanqaku amatsha
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IAmazon iphinda ibhale i-FreeTime kwiAmazon Kids, yongeza amanqaku amatsha
IAmazon iphinda ibhale i-FreeTime kwiAmazon Kids, yongeza amanqaku amatsha
IAmazon ibhengeze namhlanje ukuba iFreeTime kunye neFreeTime Unlimited ziba ngamaAmazon abantwana kunye neAmazon Kids +. Ukuphinda kukhululwe kuhlose ukunika igama elifanelekileyo ngakumbi kwiinkonzo zabantwana ezikhulu zenkampani, kunye nokongeza amanqaku amatsha kwitafile. I-FreeTime kunye neFreeTime Unlimited bonwabele ukuthandwa kakhulu phakathi kwabazali nabantwana kule minyaka imbalwa idlulileyo, ngaphezulu kwezigidi ezingama-20 zabazali abasebenzisa le nkonzo.
I-Amazon yaBantwana yaBantwana + yakhela phezu kwezixhobo kunye nomxholo, obonelelwa liFreeTime. IAmazon Kids + sele ibonelela ngaphezulu kweencwadi ezingama-20,000, iimuvi, iincwadi eziVakalayo, imidlalo, kunye nomxholo wolwimi lwaseSpanish olwenzelwe abantwana kuphela, kwaye banokulufikelela ngokulula kwithebhulethi yabo yoMlilo yeAmazon. Kukho umxholo omtsha wesikrini sasekhaya, esinconyelwe abantwana abasibhozo nangaphezulu, esivumela uMlilo weAmazon ukuba ujonge kwaye uzive ngakumbi njengecwecwe 'lokukhula', ngaphandle kokuyekisa izihluzo zomxholo kunye nezinye izithintelo ezibekwe kwiDashboard yoMzali weAmazon.
Ngamagama amatsha kuza enye into enomdla eya kuthi ivumele abantwana ukuba basasaze umyalezo welizwi kwizixhobo ze-Alexa endlwini. Umsebenzi ubizwa ngokuba ziZaziso kwaye ufuna ukuba imvume yabazali yenziwe isebenze.
Icandelo lomxholo wenkonzo likwandisiwe ngamakhulu ezinto ezitsha ezikhethwe ngesandla kangangeminyaka emithandathu ukuya kweli-12, kubandakanya iividiyo zokudlala kunye ne-PG kunye nezihloko ezenziwayo ezivela kwiimveliso ezithandwayo kunye nabalinganiswa abanjengeentaka ezinomsindo, i-LEGO, iinguqu, uBarbie , UCarmen Sandiego. Izikhululo ezahlukeneyo zomculo ezivela kwiHeartRadio Family zongezwe ngokuthe ngqo kwiscreen sasekhaya seAmazon.
Inkonzo yabantwana iAmazon ihlala isimahla kubazali, ngelixa Abantwana + Imirhumo iqala kwi- $ 2.99 ngenyanga ngenyanga kumalungu eNkulumbuso nakwi-4.99 yeedola ngenyanga kuye wonke umntu. Inqaku elitsha liza kuqengqeleka kwezi veki zilandelayo.
htc enye m7 vs galaxy s4
Ityala elisecaleni le-s7 nge-kickstand
Zonke iiFowuni zokuthenga kunye neeapos (ezinezicwangciso) ziza nekhadi lesipho elingu- $ 50 kule mpelaveki kuphela
Ungayirekhoda njani ividiyo yeDolby Vision HDR kwi-iPhone 12 / Pro
I-LG G6 vs LG G5
I-T-Mobile ekugqibeleni iqala ukuthengisa ithebhulethi yeAlcatel yamdaka nexabiso eliphantsi nge4G LTE
Ngaba kufanelekile ukuthenga i-iPad ngo-2021 kwaye uyayidinga ngokwenene
Zisixhenxe zezona zixhobo zibalaseleyo ze-Android zamacwecwe
I-Apple itshintsha amaxabiso ezixhobo ezisetyenziselwa ukurhweba ngaphakathi
Fumana iVerizon kunye neapos, s iPixel, i-iPhone 7 okanye i-S7 ye- $ 10 / ngenyanga ngeentengiselwano zokurhweba
Umhla wokukhutshwa kukaGoogle Pixel 6, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba